Nalalka UV-da ee lagu nadiifiyo biyaha → Acuva • Yachts • Kaamamka • Guriga
Nalalka UV UV - wax ka baro wax ku ool ah oo u fudud-isticmaalaha KACDOONKA tikniyoolajiyadda sifaynta biyaha!
Sidee loo nadiifiyaa biyaha?
Waxa ugu horreeya ee qof walba maskaxdiisa ku soo dhacayaa waa inuu u oggolaado inuu xoogaa maro filtr.
Wasakh ayaa kusii nagaan doona shaandhada waana nadiifin doonaa biyo.
Si kastaba ha noqotee, waxa la samaynayo xaalad ay biyuhu u muuqdaan inay nadiif yihiin, oo waxyaabaha ku jira ay ku jiraan waxyeelo u geysan karta, xitaa khatar ku ah caafimaadkeena fayrasyada, bakteeriyada iyo noolaha kale?
Kaliya in la mariyo miiraha waxba ma qaban doono. Kiiskan, biyaha waa in la nadiifiyaaoo kaliya maahan shaandhayn.
Ha shaandheyn biyaha - nadiifi!
Nadiifinta, daaweynta ama jeermiska ayaa ah geedi socod umuuqda mid adag oo laqaban karo, tusaale ahaan, isticmaalka kiimikada.
Qaar badan oo ka mid ahi waxay si xun u saameeyaan deegaanka dabiiciga ah, gaar ahaan noolaha biyaha ku jira. Sidoo kale ma dooneyno inaan isku sumeyno kiimiko oo aan u isticmaalno biyo aan udgoon laheyn urta u eg gudaha farmashiyaha.
Marka maxaa la isticmaalayaa?
Waad sameyn kartaa. Daaweynta ozone waxay si wax ku ool ah u nadiifisaa oo dhexdhexaad u tahay dhadhanka biyaha. Si kastaba ha noqotee, way adag tahay in la qiyaaso aaladda biyaha guriga.
Marka si dhakhso ah, raqiis ah, wax ku ool ah, oo ah jawi bey'adeed oo aan dhadhan lahayn oo biyaha nadiif ah guriga lagu dhigo ... xerooyinka, doonyaha yar yar, xafiiska iyo dukaanka?
Nalalka UV-ka ee Acuva UV
Waxaan kuu soo bandhigeynaa shirkad tiknoolajiyad sare leh Acuva. Waxaan nahay qeybiyaha gaarka ah ee tooska ah ee wax soo saarka Acuva ee suuqa Booland.
Acuva waa xirmooyinka biyaha lagu sifeeyo iyadoo la isticmaalayo Nalalka UV UV. Kuwani waa badeecadihii ugu dambeeyay ee loogu talagalay Kanada.
Nadiifinta biyaha isticmaalka Acuva nidaamyadu waa xitaa 100 jeer ka waxtar badan isticmaalka hababka tartanka.
Intaa waxaa dheer, isticmaalka Nalalka UV UV waxay alaabada Acuva ka dhigeysaa xalka ugu fiican ee kaliya ma ahan guriga iyo xafiiska, laakiin sidoo kale waxay u fiican tahay in lagu nadiifiyo biyaha doonta ama mootada.
Sifeeyaha biyaha iyadoo la adeegsanayo Acuva UV-LED waxay ku saleysan tahay aqoontii ugu dambeysay ee farsamada iyo cilmiga deegaanka. Ma jiraan wax kiimikooyin ah, sida koloriin, oo lagu soo daro biyaha.
tirtirtaa 99,9999% bakteeriyada fayrasyada iyo cudurada keena
Biyaha kaliya waxaa la mariyaa jeermiska jeermiska dila, taas oo ka dhasha taas 99,9999% bakteeriyada, fayrasyada iyo dhamaan cudurada kale ee jiran ayaa laga saaraakuwaas oo sababi kara dhibaatooyin caafimaad oo si fudud uga gudbaya shaandhada biyaha dhaqameed kasta.
Waxay adeegsadaan sifaynta biyaha Acuva UV LED, waxaan ka cuni karnaa biyaha webiyada iyo harooyinka anaga oo aan ka baqaynin inaan ka xanuunsano isticmaalka bakteeriyada, fayrasyada ama noolaha ku nool biyaha. Nalalka UV UV dili doonaa fayrasyada, SARS-COV-2iyo bakteeriyada sababi karta dhibaatooyinka caloosha.
Sifeynta biyaha iyadoo la adeegsanayo laambada UV-LED saameyn kuma yeelaneyso dhadhankeeda. Bakteeriyada, fayrasyada iyo cudurada keena ayaa dhinta, laakiin qaabka biyaha isma badalo. Wax walax ah lama soo bandhigin, sidaa darteed biyuhu waxay u dhadhamayaan si la mid ah sidii ay ahaan jireen ka hor intaan la nadiifin. Urkeeda iyo midabkiisuba isma beddelaan. Sifeeyaha Acuva UV-LED ma sameeyo wax ka badan iftiinka.
Sifeynta biyaha waxay kakoobantahay in lagu daaweeyo dhererka dhaadheer, inta udhaxeysa 250 iyo 280 nm. Soo-gaadhista noocan ahi waxay keentaa in hidde-sideyaasha noolaha ku nool biyaha ay jabaan. Natiijo ahaan, biyaha ayaa la nadiifiyaa. 99,9999% dhamaan bakteeriyada, fayrasyada iyo cudurada kale ee jiran ayaa dhinta.
Tikniyoolajiyadda jeermiska lagu diro ee isticmaalaya laambadaha UV-da ayaa hadda ku socda horumarin xoog leh waxaana marba marka ka dambeysa loo isticmaalaa meelo kala duwan oo dhaqaalaha ah.
Si kastaba ha noqotee, xitaa uma baahnid inaad tan ogaato, maxaa yeelay adeegsiga nidaamyada Acuva UV LED waa mid aad u fudud. Uma baahnid inaad wax ka qabato wax kasta oo murugsan. Uma baahnid inaad wax xasuusato. Sifeeyaha biyaha ee Acuva UV LED waxaa loo isticmaalaa si la mid ah tubada caadiga ah.
Intaa waxaa sii dheer, nidaamyada biyaha lagu nadiifiyo ee Acuva UV-LED waa kuwo xajmi ahaan le'eg. Waxay qaataan meel aad u yar, sidaa darteed waxay ku habboon yihiin safarada, xerooyinka iyo maraakiibta, doomaha iyo doonyaha.
Waxaa si fudud loogu isticmaali karaa guryaha xagaaga, dukaamada, xafiisyada, maqaayadaha, iyo sidoo kale guryaha kelida ah iyo qoysaska badan.
Si ka duwan sida miirayaasha biyaha, laambadaha UV-LED-ku waa kuwo aan dayactir lahayn.
Uma baahnid inaad wax nadiifiso ama beddesho. Waxba ma xiraan. Muhiim ma aha in la xakameeyo heerka wasakhda ee shaandhada. Halkan, laambadda UV-LED ayaa ka dhalaalaya biyaha.
Isticmaalka nalalka nalalka ee loo yaqaan 'florescent lamp' sidoo kale waa wax weyn oo loogu talagalay isticmaalaha. Waxay saameyn togan ku leedahay hawlgalka dayactirka-bilaashka ah ee dhammaan nidaamka daaweynta biyaha.
Falaarta Acuva 5 tubada biyaha ee UV-LED
Nolosha adeegga ee 10 + sano
Waxay leedahay damaanad dheer iyo nolol. Nalalka caadiga ah waxay u baahan yihiin in si joogto ah loo beddelo. Nalalka laydhku waxay leeyihiin dammaanad 10 + sano ah, ha kululaynin, isla markaaba markaad shaqeysid shaqee ha shidin.
Marka la barbardhigo laambadaha lagu sameeyay teknolojiyadda soo jireenka ah, wax soo saarka Acuva UV-LED sidoo kale waa mid jawi ahaan u fiican, maadaama uusan meerkur ku jirin laambadaha LED-ka.
Falaarta Acuva 5 UV-LED
UV-LED sidoo kale wuxuu leeyahay isticmaalka korantada oo aad uga hooseeya nidaamka UV ee ku saleysan nalalka meerkurida dhaqameed. Nidaamyada Acuva UV-LED waxaa loogu talagalay inay ku shaqeeyaan baytariyada. Waxay kuxiran karaan korontada 12V iyo sidoo kale AC DC.
Acuva waxay soo bandhigtaa alaabooyin ku habboon nooc kasta oo adeegsi ah. Laga soo bilaabo noocyada kala duwan ee biyaha lagu nadiifiyo ee loo yaqaan 'UV-LED', waxaad ka dooran kartaa aalado, tusaale ahaan awood ahaan 5 litir daqiiqadii iyo adeeg adeeg dhan 900 litir.
Acuva Eco NX-Silver UV-LED oo leh qasabad
Jooji ka welwelka biyaha dhalada ku jira doonyahaaga ama safarkaaga. Isticmaal biyaha qadka ka baxsan oo nadiifi ka hor intaadan cabin adoo isticmaalaya nidaamka jeermiska Acuva UV-LED. Ku raaxayso si nadiif ah u nadiifi biyaha tuubada doontaada dhexdeeda iyo RV-gaaga ama gurigaaga fasaxa ah ee aan lahayn biyo waaweyn.
Doorashada nidaamka nadaafadda biyaha Acuva UV-LED waxaad dooraneysaa badeecadaha ugu tayada sareeya ee bixiya biyaha ugu nadiifsan, nadiifka ah gurigaaga, doonta ama mootada.
Nalalka UV LED vs. Nalalka UV
Farsamaynta daaweynta UV ee caadiga ah waxay isticmaashaa laambadaha UV meerkurida Si kastaba ha noqotee, waxaa jira walaac daran oo ku saabsan saameynta deegaanka iyo xaddidaadda waxqabadka nalalka UV.
acuvaeco ecoacuva eco uv hogaaminayoacuva ayaa horseeday nidaamka nadiifinta biyaha ee UVnidaamka nadiifinta acuvateknoolojiyada acuvateknoolojiyada acuva incAcuva UV LEDacuva uv sifaynta biyahabiyaha acuvamiiraha biyaha acuvanidaamka nadiifinta biyaha acuvamiiraha biyaha acuvanidaamyada daaweynta biyaha acuvaNalalka Allegro UVLaydhka UV-da ee GermicidalUV LED shumaca jeermiskaNalalka UV-da ee Germicidal ee biyahasifaynta biyaha noolahaHaddii laambadaha ledhka ee UV-ga waxyeello leeyihiinwaa laambadaha UV waxyeello u lehjeermiska biyaha ee uvjeermiska lagu daaweeyo biyahajeermiska biyahahababka jeermiska lagu nadiifiyo biyahajeermiska ka cabba biyahajeermiga dila jeermiska biyahajeermiska jeermiga ee haamaha biyaha la cabbosifaynta biyaha guryahaUv led led for jeermiska biyahanalalka jeermiskalaambado ledh iyo UVlaambadaha ledh UV shucaacalaambadaha UVdib u eegista laambada UVNalalka UVUV ama laambado la shitolaambadaha UVUV iyo laambado la shidaylaambadaha UVUV dib u eegista laambadahabiyo loogu horseedaylaambadaha UV hagaagsanlaambadaha ugu wanaagsan ee loo yaqaan UVsifaynta biyahadaaweynta biyaha roobkanadiifinta biyaha la cabbodaaweynta biyaha warshadahasifaynta biyaha badbaadadanadiifinta biyaha gurigasifaynta biyaha ee ceelkanadiifinta biyaha tuubadasifaynta biyaha ceelashasifaynta biyahaDaawada UV-kaSifeeyaha biyaha ultravioletSifeeyaha biyaha ee UVdaaweynta biyaha ee loo yaqaan UVNidaamka daaweynta biyahanadiifinta biyaha uu hogaamiyo UVshirkadda sifaynta biyahamaxaa nsf la xaqiijiyaybiyaha doonta saaranbiyaha mootadaguluubka laambadda UVnalalka led for laambad UV